Pages: « 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 | Go Down
Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 248000 times)
« Reply #760 on: January 06, 2015, 02:20:46 PM »
တစ်ခါက တိုင်းပြည်အကြီးအကဲ တစ်ဦးသည် မိမိ၏ နာမည်နှင့် ဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ချင်သည့်အတွက် ၄င်း၏ပုံကို တံဆိပ်ခေါင်းအဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့သည် ။ထုတ်ဝေပြီး
တစ်လခန့် အကြာတွင် ရောင်းအားကောင်း မကောင်းစာတိုက်ကြီးသို့ကိုယ်တိုင်သွားရောက် စုံစမ်းခဲ့သည် ။
အကြီးအကဲ..." ငါ့ပုံနဲ့တံဆိပ်ခေါင်း ရောင်းကောင်းသလားဟေ့.."
စာတိုက်မှူး..." ကောင်းပါတယ်..ဒါပေမဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းက သိပ်မကပ်ဖူးလို့ပြောကြတယ်.."
တံဆိပ်ခေါင်းတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်ယူပြီး နောက်ကျောကို တံတွေးထွေးကာ စာအိတ်ပေါ်တွင် ကပ်ကြည့်လိုက်သည် ။
အကြီးအကဲ.." ကပ်လိုက်တာမှ မြဲနေတာပဲကွာ.."
စာတိုက်မှူး..." သူတို့ က တံတွေးကို တံဆိပ်ခေါင်းရဲ့ရှေ့ မှာ ထွေးကြလို့ ပါ ခင်ဗျ.."
« Last Edit: August 25, 2015, 01:31:21 PM by tunaye2011 »
« Reply #761 on: August 25, 2015, 01:27:51 PM »
Unless you're sure you want to reply, please consider startinganew topic. တဲ့
ဟာနေတာတွေလည်း မသနိုင်..ရီဘို့ နေနေသာသာ မောမော နေရတာနဲ့၆ လကျော် ဘာမှ မတင်ဖြစ်ခဲ့ပါလား..
အခုတော့ ဦးပေါ်ဦးကို ပင်တိုင်ထားပြီး ဟို အပျိုကြီးကို စချင်လို့ ရေးလိုက်ဦးမှ....
" ဟဲ့..ပေါ်ဦး..အပျိုကြီး ဖြစ်ရတာ ရှုံးလား မြတ်လားဟဲ့..? "
" မှန်ပါ့..သေသေချာချာတွေးကြည့်ရင် ရှုံးကြောင်းပါဖျား..
အဖေနဲ့ အမေ နှစ်ယောက်က သူ့ ကို မွေးလိုက်တာ သူက နှစ်ယောက်ပြန်မွေးမှ အရင်းပဲ ရှိပါတယ်ဖျား..
ခုတော့ တစ်ယောက်တောင် ပြန်မမွေးနိုင်မှတော့ ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးနေကြောင်းပါ့ ဖျားး...."
မှတ်ချက် ။ ဘယ်အပျိုကြီးလဲ မမေးရ..ကွကိုသိကြသည်..။
« Last Edit: August 25, 2015, 01:30:39 PM by tunaye2011 »
« Reply #762 on: May 09, 2016, 03:05:00 PM »
ကျနော့် အိမ်နားမှာ နေတဲ့ ကိုဖိုးတုတ် တရက်မှာ သူ့သား စာမေးပွဲမှာ ၃ ဘာသာကျလို့
ဆရာမက ကျောင်းကို လာတွေ့လှည့်ပါလို့ စာရေးပြီး ခေါ်တွေ့တယ် ။ကိုဖိုးတုတ်က ကျနော့်ကို သူနဲ့
လိုက်ခဲ့ပေးပါခေါ်လို့ လိုက်သွားခဲ့တာ ကံကောင်းလို့ ရဲစခန်း မရောက်တယ်
ဆရာမက သူ့သားဟာ စာမကြိုးစားကြောင်း လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ကို ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘဲ ကူးချကြောင်း အိမ်စာပေးလဲ မလုပ်ကြောင်း ဒီပုံစံအတိုင်း သွားနေရင် အတန်းမတက်ဘဲ ကျမှာ ဖြစ်ကြောင်း ကိုဖိုးတုတ်ကို ပြောတယ် ။ ဆရာမက အရွယ်တင်တယ်ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်လည်း လှတယ်
မျက်နှာမှာလည်း မိတ်ကပ်ပါးပါး နှုပ်ခမ်းနီရဲရဲနဲ့ အတော်ကြည့်ကောင်းတယ် ။ ကိုဖိုးတုတ်က ဆရာမ
ပြောနေတာကို နားထောင်ရင်း ဆရာမကိုမျက်တောင်မခပ်တန်း ငေးကြည့်နေတယ် လှလည်းလှတာကိုး
ဆရာမက ကိုဖိုးတုတ်ကို စာမေးပွဲကျတာ သိရှိကြောင်း လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ် ။ ထိုးပေးပြီး အေးဆေး
မပြန်ဘဲ လောကွတ်စကားသွားပြောတဲ့ ကိုဖိုးတုတ်
အစကမှ သူ့မျက်လုံးဒဏ်ကြောင့် အနေရ အထိုင်ရ ခက်နေတဲ့ ဆရာမတခါတည်း ပေါက်ကွဲပြီး
ကျောင်းအုပ်နဲ့တိုင်မယ် အိနြေ္ဒဖျက်ဆီးမှုနဲ့ အမှုဖွင့်မယ်နဲ့ လုပ်လို့ ကြားက ကျနော်တောင်းပန်ပြီး အမြန်ဆွဲခေါ် ပြန်ပြေးခဲ့ရတယ် ။ သူပြောတာက
ဆရာမ သားလို သဘောထားပါ
သားရဲ့ဒုတိယ အမေပါဘဲ " တဲ့
ပြောပုံ ကိုက အနှောင့်အသွား မလွတ်နေရာတကာ အမေ အမေ နဲ့ လေးစားတာလိုလို
Credit to Origin
Pages: « 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 | Go Up